“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: “အကြို ကျီစယ်ခြင်း”
Posted by Yu Ya at 12/15/2009 09:52:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဩော် .. ကျီစယ်တာတောင် အကြို တဲ့လားးး
တကယ့် အစစ်သာဆို မတွေးဝံ့ တော့ ပါ ဘူး ကွယ် ..
ကြောက်စရာကြီး ...( စကားလုံး ကိုပြောပါတယ် )..
ကင်းဝေးကြ ပါ စေ .......
တကယ်ကျီစယ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာ ကို လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ်ဗျာ ...
အော် စကားလုံးနှယ်... ကျီစယ်တာတောင် အကြိုဆိုတာ ရှိသေးတယ်... ဖုတ်ဖတ်ခါ နာကျင်သွားရတဲ့ သူအတွက်တော့ ကျီစယ်တာက အကြိုပါ ဆိုပြီး မေ့ပျောက် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား...
စကားလုံးတစ်လုံး အနက်က တော်တော်ကျယ်ပြန့် 
သွားတယ် ဗျာ . . . ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗဟုသုတရတာပေါ့
မကောင်းမှုကို လုပ်ရမှာ ရှက်တာ မကောင်းမှုကို လုပ်ရာမှာ ကြောက်တာဆိုတဲ့ လောကပါလ တရားတွေ နည်းပါးလာတာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ် မှတ်သားစရာ ပိုစ့် လေးမို့အင်မတန် သဘောကျမိပါတယ် ကိုယုယ ရေ
မောင်ယုယ ဘယ်လိုဖြစ်တုန်းကွယ်။ ထူးထူးခြားခြားပိုစ့် ပါလား။ အကြိုတွေ အကျတွေလုပ်မနေနဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်မောင်ယုယရေ။ ရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ စောင့်ထိန်းဖို့ ဆိုတာတွေက လူ့ကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာပါပြီးသားပါ။ လိုက်နာဖို့သာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံး အဓိပ္ပါယ်ပြန်ပုံလေးက တွေးစရာပါပဲ။
ဒီသဘောတရာကို လူတိုင်းသိပေမယ့် အင်္ဂလိပ် လို့ အသုံးအနှုန်းကို ခုမှပဲ သိရတယ်။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျား)
အကြို ကျီစယ်ခြင်း ဆိုလို့ . ဗဟုသုတ မှတ်သွားပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်း (ယောင်္ကျား မိန်းမ မဟူ) ဒီစိတ်ထားလေး ကို သိပြီး လိုက်နာမယ် ဆို
"16 Days Activism" လို SGBV ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု တွေ ဘယ်လုပ်စရာ လိုတော့ မလဲ နော် ယုယ ရေ.. ခုတော့ ..
လာဖတ်ပါတယ် ကောင်းတယ် အဲဒီလိုလေး မျှဝေပေးတာ
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ။ လူသားတိုင်း လိုက်နာရင် ပျော်စရာကောင်းပြီး အရမ်းကို လှပတဲ့ လောကကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။ အခုတော့.....တချို့ယောကျာ်းတွေကစည်းဖောက်၊ တချို့ မိန်းကလေးက အတွေ့အကြုံရှိပြီးတဲ့သူကိုမှတဲ့
အဲဒီတော့ အိမ်ကမိန်းမ စိတ်ဆင်းရဲပေါ့ အစ်ကိုရာ